Atileet Salamoon Baragaa Olompikii Tookiyoo irratti fiigichaa meetirii 100 tin medaaliyaa warqii argate, Adoolessa 30, 2021
Waldorgommii Oloompikaa kan Jaapaan keessatti Jimaata har’a gaggeeffameen Atleet Solomoon Baragaa figiicha meetra kuma kudhaniin badhaasa meedaala warqee kan jalqabaa Itiyoophiyaaf argamsisee jira.
Solomoon figiichi kun xumuramuuf meetiriin muraasnii lafa hafeetti iddoo duraa qabachuun Daqiiqaa 27 seekondii 43 tuqaa 22n injiifate.Itti aanee galuun meedaala Meetii kan argatee lammii Ugaandaa Joshu’aa Cheptegei yoo ta’u meedaala Naasaa immo lammii Ugaandaa kan biraa Jaakoob Kiplimootu argatte.
Atleetiin Itiyoophiyaa Berihu Aregaawwii 4ffaa Yoomiif Qajeelchaa dabalatee lammiwwan Afrikaa kanneen biroo hanga sadarkaa 10 tti injifatan.
Fiigicha meetra kuma 5 gaggeeffameen Atleetonni Itiyoophiyaa Sanbaree Tafarii, Ijjigaayeehhuu Taayyee fi Gudaaf Tsegaay injifachuun dorgoommii marsaa itti aanuuf darbanii jira.
Dorgommii Daakaa bishaanii har’a gaggefefame irratti Itiyoophiyaan kan hirmaattee yoo ta’u Abdil Meliik Tofiiq Muktaar garee ramaddii isaatii 6ffaa ta’uun dorgommii marsaa dhufuuf hin dabriin hafeera.
Kamiisa kaleessaa Fiigicha waa irra utaaluu of keessaa qabuu kan meetra kuma sadiin Lammeechaa Girmaa injifachuun marsaa itti aanuuf darbee jira.Dorgommii wal fakkaataan ramaddii ka biraa irraa Atleet Geentneet waalee lamaffaa ta’uun injifatee marsaa isa xumuraf darbee jira.
Figiicha meetra 800n Habtaam Alamuu ramaddii ishee irraa lammaffaa ba’uun marsaa itti aanuuf dabartee jirti.